क्याम्पसका प्रथम हुने कविता सरकारी जागिर खाएर अधिकृत बन्न चाहन्थिन् तर बिच बाटोमै टुट्यो सबै सपना ! – ईमेची डटकम
क्याम्पसका प्रथम हुने कविता सरकारी जागिर खाएर अधिकृत बन्न चाहन्थिन् तर बिच बाटोमै टुट्यो सबै सपना !
काटाकुटी, दोलखा : आइतबार चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका ९ को सुकुटेस्थित सुनकोशी नदीमा भएको बस दुर्घटनामा ज्या’न गुमाएका १४ वर्षीय रिकेश खड्का ६४ वर्षीय हरिबहादुर खड्काका एक्ला सन्तान हुन् ।
सोही दुर्घटनामा ज्या’न गुमाएकी २० वर्षीय कविता राउतको सरकारी जागिर खाएर अधिकृत बन्ने लक्ष्य रहेको उनकी फुपू सरस्वती राउतले बताइन् । सदरमुकामको कालिञ्चोक माविबाट भर्खरै एजुकेशन साइन्समा प्लसटुमा ३ दशमलब ४१ जीपीएसहित क्याम्पस प्रथम भएकी थिइन। सरकारी जागिरको तयारी कक्षा र स्नातक तहको पढाइका लागि भर्ना हुने लक्ष्यसहित बिहान हाँसीखुशी बस चढेकी कविताको निधनको खबरले उनकी आमा अम्बिका राउत छिन छिनमा मुर्छा पर्छिन्।
बस दुर्घटनामा छोराको निधनको खबर सुनेका खड्का र छोरीको निधनको खबर सुनेकी अम्बिका बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन्। सोमबार दिउँसो २ बजे शैलुङ गाउँपालिका ५, काटाकुटीको खड्का र राउतको टोल पुग्दा सुनसान थियो।
काटाकुटीमा रहेको टिकट काउण्टरबाट आइतबार आफैंले टिकट का’टेर पठाएका आफन्त तथा छिमेकीमा सन्नाटा छाएको थियो। सान्त्वना दिन मृ तकको घरमा पुगेका छिमेकी पनि एकअर्काको अनुहार हेर्दै टुलुटुलु हेरिरहेका थिए। आँशु झार्नु बाहेक विकल्प थिएन।
अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सुकुटेमा भएको बस दुर्घटनामा ज्या न गुमाएकामध्ये सात जनाको सामूहिकरुपमा दाहसंस्कार गरिएको छ । उनीहरुको बाह्रबिसेस्थित भोटेकोशी नदीमा दाहसंस्कार गरिएको हो ।
मृ तकमध्ये उदयपुरको विजय तामाङको श व उदयपुर नै लगिने र चितवनकाी पूजा बस्नेतको श व लिन आफन्त सम्पर्कमा आइनसकेकोले काठमाडौंस्थित टिचिङ अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त दुर्घटनामा मृ त्यु भएका केही यात्रुको भने आफन्त नआएका कारण दाहसंस्कार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सुकुटेमा आइतबार भएको बस दुर्घटनामा १८ जनाको निधन भएको थियो । दोलखाको मुडे देउरालीबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बा२ख ७२४५ नंको बस सुनकोशी नदीमा खसेको हो ।